तरकारी महंगो भो ! गुन्द्रुक छ त « Kakharaa
तरकारी महंगो भो ! गुन्द्रुक छ त
१६ बैशाख, काठमाडौं । अहिले जतातैं कोरोनाको त्रास सँगै लकडाउन भएको छ । यस्तो अवस्थामा बजारमा पर्याप्त मात्रामा तरकारी पाइएको छैन् । पाइहाले पनि मुल्य अधिक छ । तर, पिर नगर्नुहोस्, गुन्द्रुक छ नी । विश्वमा नेपालको चिनारी दिने परिकार हो, गुन्द्रुक । गुन्द्रुक नेपालको ग्रामीण भेगदेखि तारे होटलसम्म प्रख्यात छ । यो विदेशीले पनि अत्यन्तै पन पराउने परिकार हो । यस्तै, छोटो समयमै तयार गर्न सकिने स्वादिष्ट परिकार हो गुन्द्रुक ।
गन्द्रुक खानुका फाइदा
आँखाको भिजनका लागि गुन्द्रुक अति उपयोगी मानिन्छ । यसले आँखा चिलाउने, दुख्ने, सुख्खा हुने समस्यालाई कम गर्दै लैजान्छ । गुन्द्रुकले आँखामा हुने अल्सरको सम्भावनालाई पनि कम गर्छ । गुन्द्रुक नियमित सेवन गर्दा तौल घटाउनमा मद्दत पुग्छ । यसले क्यान्सरको सम्भावनालाईसमेत दुर गर्ने काम गर्छ ।
ग्याष्ट्रिक र अल्सर भएका बिरामीले पनि सादा गुन्द्रुकले फाइदा पुर्‍याउँछ । गुन्द्रुकमा खनिज पदार्थका मात्रा प्रशस्त हुन्छ – स्मरणशक्ति कम हुनेहरुले रायोको गुन्द्रुक सेवन गर्दा राम्रो हुन्छ । अधिक कोलस्ट्रोलको समस्या छ भने पनि त्यसलाई कम गर्नका लागि रायोको गुन्द्रुक सेवन गर्न सकिन्छ । यसले कोलेस्ट्रोल घटाउनको लागि भूमिका खेल्छ । शरीरका हड्डी मजबुत बनाउनको लागि पनि गुन्द्रुक सेवन गर्दा हुनछ ।
सामान्यतया गुन्द्रुकलाई झोलको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन छ । तर, यसलाई अरु पनि स्वादिष्ट परिकारको रुपमा तयार पार्न सकिन्छ । मस्यौरा, सिन्की, माछाको ग्रेभी बनाउँदा पनि गुन्द्रुक प्रयोग गर्दा निकै स्वादिष्ट हुन्छ । कागती, टिमुर, नुन, खुर्सानी, भुटेको भटमास, धनीया, भुटेको तोरिको तेल राखि गुन्द्रुकलाई साँधेर पनि खान सकिन्छ ।